Lapho uthenga Ukukhetha ikhamera, njengoba noma iyiphi enye zinto kufanele ngesisekelo Ukucaciswa. Nokho, akuyona engadingekile ukwazi impendulo yokuthi ubani ifa ikhamera bese ukuqhathanisa izithombe ezithathwe ngamakhamera ezahlukene. Ungabuza abangane bakho nayejwayelene ngoba imibono yabo. Kodwa manje sizoxoxa kanjani ukukhetha ikhamera digital ngokuqhathanisa izici lobuchwepheshe.
Lapho ekhetha ikhamera yedijithali iyona isici sokuqala, okuyinto kufanele sinake - lena inombolo megapixels. Lesi sici kubonisa ukuthi kungenzeka ukuthola isixazululo esiphezulu izithombe ezithathwe nalesi ikhamera ngaphandle kokulahleka izinga. Ahamba omuhle ukugcina kwabo ku-albhamu ekhaya, ngokwanele megapixels 2-3 kuphela. Ukuze uthole amavidyo elula amateur ohlwitha 3-5 megapixels, lezi amakhamera vumela eside Ukusebenzisa i-zoom-optical, khetha ukudubula izindlela futhi Ziningi ezinye izinketho. Kukhona amakhamera isinqumo ezingaphezu kwezingu-10-megapixel, muva nje isibalo sabo eside kakhulu, kodwa ngenxa abavamile amavidyo amateur lokho inombolo pretty big.
Lapho ecabanga ukuthi ukukhetha ikhamera, kudingeka acabangele ukuthi nethonya main izinga isithombe has a ikhamera-matrix. Kuyinto obangela umsindo esithombeni, umbala kanye nokujula ukuhumusha imininingwane emihle. Ikhamera kumele akwazi ukulungisa ukuzwela ukwimodi yokuzenzela ukuthola izithombe eliphezulu. Khona sizokwazi ukuthola izithombe eliphezulu ngisho ekukhanyeni ongaphakeme. Ngaphambi ukhetha ikhamera yedijithali, thatha ukunakekela amathuba yokukhanya yayo. ipharamitha ezifana ukwanda (zoom) kuyinto optical noma digital. Eliphezulu amakhamera benomthwalo, futhi ezishibhile ngokuvamile babe digital kuphela.
Ikhwalithi izithombe kuzoncika kakhulu electronics kwikhamera. Eziningi zalezi idatha kulotshwe ifomethi ye-JPEG, ngenxa yokuthi kuthatha isikhala ngaphansi kwimemori ngoba. Uma kusekelwa TIFF nezakhiwo RAW, it is ukukhuluma kakade mayelana ezingeni eliphakeme kanye nekhwalithi electronics ikhamera. Ngaphambi ukhetha ikhamera yedijithali, phawula lokho umthombo wakhe wamandla. It akuphazamisi izinga izithombe, kodwa kubaluleke kakhulu ngokusebenziseka. Ngokuvamile, amaseli asetshenziswa penlight amabhethri, okuyinto kwanele inombolo encane izithombe. Kuyinto elula kakhulu uma ikhamera ifakwe amabhethri, kodwa ngenxa yokuntuleka kwezinhlelo ezibanzi Izitolo eduze kuyinto efiselekayo ukuba ibhethri eliyisipele.
Ngokuvamile, isithombe ikhamera lilondolozwe sangaphandle imemori khadi. ukusebenza Speed akuxhomekile uhlobo imemori khadi. Ezahlukene format imemori khadi kuphela, ivolumu kanye intengo, ezivame kakhulu namuhla, ikhadi le-SD. Abantu abaningi uyazibuza kanjani ukukhetha ikhamera yedijithali, a lot of ukunakwa ikhokhelwa indlela abukeka ngayo. Jabulela ekhombisa amakhamera yesimanje Kuyinto elula kakhulu, ungakwazi ngokushesha ubone isithombe esithwetshuliwe futhi wenze entsha uma kunesidingo. Isibonisi ubuyisela kusitholi sokubonwayo, okwenza kube lula ihlumela elithathwe izikhundla esiyinkinga. Libonisa zonke izilungiselelo ikhamera bese kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Kubalulekile ukuthi isibonisi has lesinqumo ngangokunokwenzeka, ukuze isithombe kwacaca ngempela. Esinye isici ekuxazululeni izinkinga, indlela ukukhetha ikhamera, kuba phambi ukuklabalasa kwakhe. Ikhamera ngaphandle flash cishe ivumela lokudubula ukukhanya ongaphakeme. Esakhelwe ngaphakathi flash onobuhle eshibhile ukusiza ngokwezinga elithile, kodwa ngokuvamile kuphela umfanekiso ukukhanya abaphulukisa futhi udale umphumela "iso elibomvu." ngokuvamile Amadivayisi ezinhle yokuvumelanisa flash izithombe, inikeza ithuba ukuthola izithombe ezinhle ekukhanyeni ongaphakeme. Kunoma ikuphi, kudingeka unqume ukuthi ukuze ukwazi ukukhetha sokugcina ikhamera, ngayiphi injongo uludinga.
Bemidwebo yobuciko umthwebuli Tom Arma zokubhukuda kanye Amazing
Arthur Schopenhauer. Izilinganiso mayelana nendlela futhi ngokunamandla kangaka ukuphila komuntu
Isidlo Georgian - kupaty kanjani ukupheka sizodlani
Kuthiwani uma Battle.net ayifakiwe
I-Solyanka kumaphikishi we-multivarque noma amadala ngendlela entsha
IBX sula - intuthuko e umkhakha yesimanje